Imibhobho esemzimbeni ngoba chainsaws (nezinamathiselo): augers, compressor, korodor
chainsaws Modern bayakwazi hhayi kuphela okugawula izingodo. Kuyinto idivayisi jikelele ukuthi kungenziwa aguqulelwe ukuqaliswa kwe-izinjongo. Uma wayefisa, abavamile uchungechunge isaha ingasetshenziswa njengendlela futha, augers, motor isikebhe noma ibhayisikili.
Ububanzi amathuba namuhla, akukho ithuluzi elilodwa ayikwazi ancintisane nabo. Ephambi kwezinduna ezengeziwe imishini babona kungaba ukumpompa amanzi emithonjeni noma imithombo, Itshe elaqheshulwa, metal, edonsa washaya iqhwa noma odakeni izimoto.
Konke lokhu kungenxa Sibonga kungenzeka ukuba nezinamathiselo. Eziguquliwe ngoba chainsaws kungaba ngokuphawulekayo ukunweba ukusebenza kwaleli thuluzi.
A amazwi ambalwa mayelana amathuba amadivayisi yesimanje
Lezi amathuluzi asetshenziswa inemandla, kodwa ezincane uphethiloli injini.
Ndawonye ngamandla iyunithi usebenza njengothisha moya fuel uhlelo kanye umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli ulwelwesi. Konke lokhu kuvumela idivayisi ukwenza imisebenzi ehlukahlukene.
On kushaft ekhishwa motor kungenziwa agibele amahhashi nezinamathiselo ahlukahlukene yokusaha, evumela ukuba wenze okuthile. Enye plus uphethiloli amathuluzi - anda ukuhamba. Imisebenzi kungaba kwenziwe kuphi.
Chainsaw inedizayini yimpumelelo kakhulu. Lapha kuhlaziywa uhlelo - kungase kwenzeke into eyivelakancane kakhulu.
izinhlobo Imibhobho esemzimbeni
Uma une Chainsaw, kodwa awazi ukuthi usebenza kanjani, futhi zonke ukhuni abaye bafa ke lolu lwazi uzokusiza zisebenzisa uphethiloli ithuluzi lilonke.
Imibhobho esemzimbeni ngoba chainsaws kungaba cishe zonke izinkinga. Kunezinto eziningi zezinto eziphilayo.
Ngakho, kukhona idivayisi evumela ukwenza sawing izingodo indiza ovundlile. Ngosizo ugongolo kungenziwa uthathe ezingxenyeni alinganayo. Kulokhu, isakhiwo Uhlaka zale divayisi iyakwazi ukunikeza rigidity kunesidingo.
Elinye ithuluzi kukuvumela usike ugongolo indiza mpo.
Naphezu lula, ukunemba cut ngezinto ze kuphezulu kakhulu.
Nge Benzorezy Kulula kakhulu ukusika wanquma ezihlukahlukene metal netshe - lena Bulgarian okufanayo, kodwa ephathekayo.
Debarker ngoba chainsaws enze kube nokwenzeka ukuba ukusula izingodo emagxolweni ehlukile Ukwakha-up. Futhi, idivayisi esetshenziselwa ukusika amapuleti, ka anemifantu ezahlukene futhi kude. Zimbili izinhlobo umlomo wombhobho. Ngakho, kukhona ama-drum debarker kanye disk.
I indophi kungasiza donsa isikebhe masinyane emanzini, emotweni udaka okulahlekile, ukuhambisa izinto ezisindayo noma ezihlukahlukene zokwakha. Indophi esebenzisa impahla eyengeziwe has a high traction amandla futhi ungashintsha trajectory motion.
futha Water kuyinto likaphethiloli yangempela futha centrifugal. umthamo Ezazimzungezile - 5 amalitha ngehora. Lena esanele amanzi kusukela emiphongolweni noma uthele endaweni suburban. Plus, lokhu okunamathiselwe iba ukuhamba ngoba chainsaws - zisebenzisa futha ezinjalo kungenzeka yonke indawo futhi ngaphansi kwazo zonke izimo.
Augers kungaba sokuprakthiza umgodi ukudoba ice, futhi nakho kungakha umgodi a 35 cm ukujula.
Futhi, idivayisi ekhethekile kusiza ukuguqula Chainsaw motor waya esikebheni.
Amandla bezihlahla kwenza kalula okwabonwa Amandla bezihlahla kanye mini-yokusaha ngeke banqunywa ngokusahwa ugodo ngezindlela eziningi ezahlukene.
Uma ufuna ukususa amagxolo Ukwakha-up kuya ukhuni, isicelo koroder. Nozzle, Chainsaw nale divayisi izosiza e ukusika izinkomishi, Slots ezahlukene yikuphi ukucushwa. Futhi nge koroderom can Whittle log.
Le tip silula futhi ngesikhathi esifanayo kuhanjwa okuthembekile. Ukulifaka ku okwabonwa ngeke kuthathe imizuzu engaphezu kwemihlanu. Amalogi emva kokwelashwa kukhona of high. Ijubane lale umlomo wombhobho kuphezulu kakhulu, futhi processing efanayo ngesandla ufake - sekuyinto inqubo eside.
Lokhu akusiyo into efana ikhanda yokugaya, kodwa hhayi elula, kodwa ekhethekile.
Isetshenziselwa uma ufuna ukucubungula izingodo, amapulangwe noma amabhodi. Lokhu umlomo wombhobho, njengalena langaphambilini, kuyasiza ukusika anemifantu noma izinkomishi log.
Lokhu okunamathiselwe yokuyidayisela obhince ibhande ekhethekile. Umlomo wombhobho zingase zingatholakali kuwo wonke amamodeli, kodwa labo lapho inkanyezi has 6 imisebe kuphela. Lapho umsebenzi Sanding olunzima ukhuni, yilokhu kuyokwenzeka ngokushesha futhi sizikhandle.
Nale divayisi ungakwazi kalula sika utshani kusayithi. Ikakhulukazi lobumfihlo ikhaya Chainsaw kumele ibe khona egalaji noma Umbuso igumbi.
Lokhu okunamathiselwe for the Chainsaw Stihl. Futhi ezihluthulelwe zabanye abakhiqizi kukhona inketho yokukhiqiza isimiso esinjalo oda. At izindleko kuze kube 2500 k. - kungcono into enkulu ngoba emzini womzalwane.
Le nsiza kusiza ukuhlanza ugodo nje owagawula noma lithi wanqunywa kusukela amagxolo ifindo. Debakery njengoba ngisho sikubiza amathiphu kuzosiza ukukhomba yimuphi ezigxotsheni, futhi kakhulu lula zonke izinhlobo zomsebenzi ezidinga ngembazo.
Umkhiqizo kubalulekile ekwakhiweni lwamakholi apholile. Uhlelo ukufakwa standard indawo Chainsaw. NgoLwesine kutholakale isidumbu sendoda accessory ifakwe ukuvikelwa ngokwengeziwe. Into kuphela - awukwazi ukusebenzisa noma iyiphi akubona.
Motor Isikebhe we Chainsaw
Planing nezikebhe ukufuduka, ukuphakama lingaphansi kuka-38 cm transom, kungenziwa ifakwe yangempela uphethiloli injini. Ifakeka, kulula ukuyisebenzisa, intengo ephansi - konke lokhu kwenza kube watshala yokufuna kakhulu.
Nozzle "bezihlahla Amandla" ngoba Chainsaw
Le divayisi isetshenziselwa ukusika metal. Futhi, lesi simiso isetshenziselwa machining olwalwenza metal noma itshe imikhiqizo, kanye yokuhlanza welds.
Lezi sekeli isebenze ngokusebenzisa ukusika disc kabani ubukhulu lingaphansi kuka-20 cm.
umlomo wombhobho "Bulgarian" ingasetshenziswa ukusika metal. Kusukela igama, okuyinto ungasebenzisa kule divayisi. Uhlelo lusebenza esebenzisa drive ibhande.
Lena indophi yangempela ongasisiza lapho ephakamisa ahlukahlukene wezimpahla ukuphakama.
Lezi imithwalo kungaba ngempela ezisindayo. Futhi, kuyinto edingekayo abashayeli abanokuhlangenwe uthanda Ukugibela kakhulu ezimweni ezimbi kakhulu. Umlomo wombhobho kulula ukufaka kanye nosayizi ezihlangene.
Lapho kuhlangene indophi is kakhulu yanda futhi alime ukucutshungulwa umhlaba e cottage ehlobo.
Ngaleli thuluzi yamba izimbobo emhlabathini noma ungqimba ice. I ububanzi we izimbobo isesikhathini 40 cm. Augers kuyinto ukuthenga kubalulekile kulabo abathanda kakhulu embonini yezokudoba ice.
Lokhu into isetshenziswa ukususa nezihlahla amagatsha. Kuyinto ikhambi ekahle labo Ziningi anakekele izitshalo. Kukhona amacebo kagesi ezinikeza amathuba afanayo, kodwa lezi amathiphu chainsaws ukuhamba ezahlukene, okuyinto inzuzo enkulu. amandla High ngesivinini.
Le nsiza - kungcono encane, indawo yokusaha izingodo ezihlangene. Iyasiza izimo mkhakha.
Sawmill kuyinto ezizimele, futhi ngaleyo ndlela asize emsebenzini lapho kungekho ugesi.
izindlela zokusebenzisa i-parachute
Abanikazi Chainsaw yesimanje nje sawing izinkuni yomculo.
Futhi ngosizo leli thuluzi elula, ungenza ibhayisikili yangempela ezinezinjini - futhi ngeke amaShayina motor-wheel. Kuvumela nezinamathiselo we ibhayisikili abavamile ukwenza imoto enamandla.
Kukhona ithiphu ukuze kwakhiwe helicopter ukukhanya noma glider. Emkhayeni lokho kungasizi, kodwa kubonisa waphinda ukuthi leli thuluzi likaphethiloli isethubeni elikhulu.
Ngalezi amathuluzi nezinto zokuhlobisa kungadambisa kakhulu izinhlobo eziningi umsebenzi.
imisebenzi abaningi lula kakhulu. Chainsaw - uyithuluzi mobile kakhulu, namadivayisi sikhule size sibe uhlelo enemisebenzi okulula esikhundleni eziningi, uma kungezona zonke ezidingekayo endlini yezwe yangasese nendlu.
Namuhla, ngosizo izesekeli ekhethekile kungenziwa kalula amise leli thuluzi ahlabayo uhambe-ngemuva kwazo izwe inqubo. Intengo iningi lalezi ukudla okuhlukahlukene ezingaphezu kuka ezinengqondo (ngokwesilinganiso ruble up 2,500). Ngesikhathi esifanayo, izindleko amadivaysi, kodwa engaguquki - okusezingeni eliphezulu.
Ngakho, lapho sathola khona ukuthi kukhona amathiphu for uphethiloli ezihluthulelwe futhi lokho abayikho.
Igesi ukupholisa. Ukupholisa egesi boilers
Lawnmower "amaViking" kagesi petrol self ezinezinjini: Izibuyekezo
I manometer electronic ingcindezi yokulinganisa
Njengoba nokunamathisela ngomthofu polypropylene amashubhu ngaphandle isipiliyoni
Amanzi imitha apharathasi begodu Umgomo we operation
Namawashi izinkuni - accessory stylish ukuze kwakwakhiwa kakhulu
TV umethuli NTV Yuliya Behtereva: Biography, empilweni yakho
Yomiselela esikrinini tablet. Ngiyishintsha kanjani ngokwami?
Ngingaba ngawakhamela induna esilevwini, emhlabeni ekhaleni, ebunzini nezihlathi?
Yini-ke kukhonta emphilweni siqu yomuntu
Izindlela, amathuluzi nezindlela lokubhula
"Bronholitin" sawo esiningi. Indlela yokusebenzisa njengoba sikaphalafini fat?
Indlela yokuthola isiziba ku "Stalker: Call of Pripyat" imfuno
Stone Lion: yini ukukhetha?